Wararka Maanta: Sabti, Oct 20, 2012-Hay'adda Qoxootiga Adduunka oo sheegtay inay kororta Tirada Qoxootiga Soomaalida ah ee galaya dalka Itoobiya
Afhayeen u hadlay hay'adda UNCHR ayaa sheegay in qoxootiga galay dalka Itoobiy ay gaarayaan 170,000 oo qof, isagoo sheegay in qoxootigan ay sii adkeynayaan qoxootiga ku nool dalka Itoobiya oo noqonaya kuwa labaad ugu badan ee ku sugan dalalka Bariga Afrika.
"Xeryaha qoxootiga Dollo-Addo ee dalka Itoobiya waxay noqonayaan kuwa labaad ee ugu weyn dunida, marka laga reebo xeryaha Dhadhaab-Kenya oo ah kuwa ugu weyn dunida" ayuu yiri afhayeenka UNCHR, Adrew Jemestic.
Sidoo kale, afhayeenku wuxuu sheegay in xeryaha qoxootiga Dollo-Addo oo shan xero ah ay ku nool yihiin 214,000 oo qof, kuwaasoo kasoo cararay dagaallada iyo colaadaha ka taagan Soomaaliya, halka ay xeryaha Dhadhaab ku nool nus malyuun qof oo qoxooti Soomaaliyeed ah.
Hay'addu waxay sheegtay inkastoo qoxootiga galay dalka Itoobiya sannadkan ay ka yar yihiin tiradii sannadkii hore ay haddana billowgii bishishii Jannaayo ee sannadkan illaa dhamaadkii bishii September ay dalka Itoobiya galeen qoxooti gaaraya 25,000 oo qof.
Sidoo kale, afhayeenku wuxuu sheegay inay xero lixaad ku kordhinayaan xeryaha qoxootiga Dollo-Addo, taasoo uu sheegay in dhismaheeda uu ku baxayo lacag dhan shan milyan oo dollarka Mareykanka ah, balse wuxuu walaac ka muujiyay inay dhibaato kala kulmi karaan qoxootiga Soomaalida ee Itoobiya galay kooxo intay dadka qafaashaan u isticmaala dagaallada.
Ugu dambeyn, afhayeenku wuxuu sheegay in laga hirgeliyeen Dollo-Addo garoon diyaaraduhu kusoo dagaan, kaasoo dhirirkiisu yahay 1600 oo mitir, isagoo xusay in tani ay ka yarenayso dhibaatooyinkii ay la kulmi jireen gaadiidka gargaarka soo gaarsiiya xeryaha qoxootiga Dollo-Addo.